Ogaden News Agency (ONA) – Daawo: Shirkii faraca Midnimo ee xerada qaxootiga Dhagaxleey oo si habsami leh u qabsoomay
Daawo: Shirkii faraca Midnimo ee xerada qaxootiga Dhagaxleey oo si habsami leh u qabsoomay
Posted by ONA Admin	/ March 31, 2015
Maanta oo Talaado ahayd taariikhduna ay ku beegnayd 31/3/15 waxaa xerada qoxootiga Dhagaxlay ee deegaanka Dhadhaab ka qabsoomay shirkii faraca midnimo ee kahowlgala xerada dhagaxlay.
Shirkan oo ahaa shirkii ugu horeeyay ee uu faracu yeesho ilaa iyo intii ladoortay gudida cusub oo ladoortay horaantii bishan 3aad ee sii dhamaanaysa ayay kasoo qayb galeen dadwayne aad ufara badan oo isugu jira xubnaha faraca midnimo, taageerayaal iyo marti sharaf.
Ugu horaynba sidii caadada ahayd waxaa shirka lagu furay aayado kamid ah qur’aanka kariimka ah iyo wacdi diini ah oo uu soojeediyay sh cabdinajiib oo ah hogaanka diinta ee faraca wuxuuna sheekhu ugu horaynba dadkii shirka fadhiyay xasuusiyay cabsida Allaah oo ay waajib tahay in ay muslimiintu is xasuusiyaan. Sidoo kale sheekha ayaa kudheeraaday arinta halganka ah ee ay shacabwaynaha ree ogadenia dal iyo dibadba kujiraan ee ah xoraynta diintoodii iyo dadkoodii iyo waliba dalkoodii oo uu si sharci dara ah kuhaysto gumaysiga madow ee Abasiiniya.
Intaas kadib gudoomiyaha faraca ahna shirgudoonkii manta ayaa kusoo dhaweeyay Sh Aadan si uu bulshada uga haqabtiro wixii war ahaa ee dalkeenii ogadenia iyo dibadaba wuxuuna si faahfaahsan uga warbixiyay dagaaladii ugu dambeeyay ee dhaxmaray Ciidanka Wadaniga Xoraynta Ogadenia iyo guwa gumaysiga Ethiopia wuxuu sidoo kale hogaanku soohadal qaaday roobabkii guga oo ka curtay meelo badan oo wadanka ogadenia kamid ah sidoo kale wuxuu kawarbixiyay isdhiib iyo goosasho badan oo ay ciidanka Hawaarintu wadeen mudooyinkii ugu dambeeyayba.
Sidoo kale waxay gudida faracu soo bandhigeen qodob kusaabsan amaanka guud ee wadankan Kenya ee jaaliyadu ku nooshahay iyo gaar ahaan amaanka shacabka S.ogadenia ee qoxootiga ku ah wadankan Kenya waxayna si qorshaysan uga warbixiyeen amaanka guud iyo ka gaarba.
Sidoo kale gudida ayaa sooban dhigay gudi hoosaada cusub ee uu faraca midnimo yeelanayo sanadkan hadii Alle idmo kuwaas oo lashaqayn doona gudiga faraca ee ladoortay horaantii bishan sii dhamaanaysa waxayna gudidu gudi hoosaadan ugu ducaysay in Allaah ku asturo xilka ay umada uhayaan.
Intaas kadib waxaa lagaadhay xiligii afkaarta xubnaha waxaana goobta fikirkooda saliimka ah kadhiibtay xubno badan oo dhamaantood laga dhagaystay fikiro dhaxalgal ah oo isugu jira talo bixino, guubaabin, mahadcelin iyo bogaadin.